အလှအပရေးရာ Archives - POPPIN NEW
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို သုံးပြီး အသားဖြူအောင်လုပ်နည်း
ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်းကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့….. (၁)ရှားစောင်းလက်ပတ်တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ပြီးရင် …
Pop Pin New June 19, 2019
မနက်တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အစွမ်းများ သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ သွားတိုက်ဆေးကို မနက်တိုင်းသွားသန့်ရှင်းတောက်ပြောင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာမဟုတ်ဖူးနော်… သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အခြားဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့လည်း ရှိပါသေးတယ်နော် (1)- အမဲစက်နဲ့ အမဲကွက်ပြသာနာများ သွားတိုက်ဆေး ၁ ဇွန်း နှင့် သံပုရာရည် ၂ စက် တို့ကို ရောမွှေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အမဲစက်နှင့် အမဲကွက်များပေါ်သို့ ပွတ်လိမ်းပေးပြီး ၁၀ …
ဆီးဖြူသီး (၅) လုံးရှိရုံနဲ့ အိမ်ထောင်သည် အအိုတွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်း
မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည်တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဆီးဖြူသီးဟာ …
“ဆံပင်အဖျားတွေကို ညှပ်ပစ်ဖို့မလိုတော့အောင် ဆံသားကောင်းလာစေမယ့် ပေါင်းတင်နည်းများ။”….
ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့်် ဆံပင်က ပျက်စီးပြီးအားနည်းနေလို့၊ ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းနေလို့ ညှပ်ပစ်ရကောင်းမလားဆိုပြီး…. တွေဝေနေတဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် ပျက်စီးပြီး အားနည်းနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို ညှပ်ထုတ်ပစ်ဖို့မလိုဘဲဆံပင်အရှည်ဆက်ထားလို့ရအောင် ဒီနည်းလေးတွေနဲ့သာ ပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါ။ လွယ်ကူပြီး အကုန်အကျလည်းသက်သာလို့ လူကြိုက်များနေတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဆိုတော့ ပျိုမေတို့လည်း ကြိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ (၁) ဆံသားအတွင်းပိုင်းထိပြုပြင်ပေးမယ့်ပေါင်းတင်နည်း ထောပတ်သီး တစ်ခြမ်း၊ ကြက်ဥအနှစ်တစ်လုံး၊ ကြက်ဆူဆီတစ်ဇွန်းတို့ကို ရောပြီးး သမအောင်မွှေပါ။ ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့ရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးပြီး မိနစ် …
ပျိုမေတို့မှာ အကြောပြတ်ရာတွေ အစင်းကြောင်းကြီးတွေ ရှိနေလို့ စိတ်မညစ် ပါနဲ့။ အခု ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးရင် တလအတွင်း ထူးခြား သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) Vitamin E Vitamin E မှာ antioxidant ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးတဲ့ အပြင် …
“မည်းညစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းကြား အသားအရေတွေကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) သွယ်”
Pop Pin New May 28, 2019
မည်းညစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းကြား အသားအရေတွေကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၅) သွယ် ပေါင်ခြံတွေ၊ ချိုင်းကြားတွေ မည်းနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျခံစရာ မလိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းနဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေပဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှာတွေ ပူစရာမလိုပါဘူးနော်။ ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးသွားရင် သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်ကိုရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) …
အမျိုးသမီးတွေ တင်ပါးလှအောင် လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ( ၅ ) ခု
ကျန်းမာလှပတဲ့ ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေချင်တာကတော့ အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါပဲ။အထူးသဖြင့် တင်မရှိ၊ ရင်မရှိဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပြောခံရမှာ မနှစ်မြို့တတ်ကြပါဘူး။အခုအခံ ဆိုတာကလည်း နေရာတိုင်း၊ အမြဲ တမ်း တော့ မကောင်းပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သလို ယုံကြည်မှုလည်း ကင်းမဲ့စေ ပါတယ်။ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှု ရှိရှိ နဲ့ တောင့်တင်းပြည့်စုံတဲ့ နောက်ပိုင်းအလှလေးရဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ တင်ပါးက …
မျက်နှာလေး ချောမွေ့ဝင်းမွတ်စေမယ့် အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း(၅)မျိုး
လူတိုင်း အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတိုင်း ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်တဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပိုင် ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုအရမ်းများတာ၊အိပ်ရေးပျက်တာ၊ အစာ အာဟာရချို့တဲ့တာ၊လေထုညစ်ညမ်းမှု၊နေရောင်၊ဆေးလိပ်သောက်တာ၊အရက်သောက်တာ အစရှိတဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ရှောင်လွှဲမရတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ေ ကြာင့် မျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းေ တွ ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့…… (၁) သံပရို၊သံပုရာ အသားအရေအတွက်ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။သံပရိုသီးကို …